Home News Ganacsade Soomaali ah oo lagu dilay K/afrika!!
Dilka Muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhacay tuulo ku taalla Magaalada Cape town,isla markaana uu geystay Nin u dhashay Dalka Koonfur Afrika.
Dad ku sugan Koonfur Afrika ayaa waxa ay sheegeen in dilkan uu yimid kadib markii Nin Madow Koonfur Afrikan ah uu ka codsaday muwaadinka Soomaaliyeed oo watay Gaari in uu hore u qaado,isla markaana uu ka aqablay,hayeeshee daqiiqado kadib socdaalkoodii Muwaadinka Soomaliyeed la dilay.
Allaha u Naxariistee Muwaadinka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabu jiray Xasan Muxudiin Cadaan oo loo yaqaanay Carabeey,kaasi oo si weyn Caan uga ahaa Magaalada cape town ee wadanka Koonfur Afika.
Inta badan dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka dhaca dilal loo geysto Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh dalkaasi,iyadoona todobaadkii la soo dhaafay lagu dilay dilkaasi Muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhalinyarada ku Ganacsada dalkaas.